Qiime Siduu Ilaahay Yahay
KU AKHRI Albanian Amharic Arabic Arabic (Morocco) Arabic (Tunisia) Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bambara Bashkir Bissau Guinean Creole Bosnian Bulgarian Cebuano Chinese (Cantonese) Chinese (Traditional) Chinese Cantonese (Simplified) Chiyao Comorian (Ngazidja) Danish Dari Digor Dutch English Finnish French Georgian German Greek Hausa Indonesian Italian Javanese Kabyle Kazakh Kazakh (Arabic) Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisi Korean Krio Kurdish Kurmanji Kurdish Sorani Lingala Macua Mahorian (Roman) Makhuwa-Meetto Malagasy Malayalam Mende Norwegian Oromo Persian Polish Portuguese Pular Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Russian Serbian Serer Shiinaha Mandarin (Fudud) Sinhala Soomaali Spanish Sunda Swahili Swedish Tajiki Tatar Thai Turkish Turkmen Urdu Uzbek Uzbek (Roman) Wolof Yoruba
QORNIINKA Quduuska ah wuxuu inoo muujiyaa siduu Ilaahay cajaaʼib u yahay sidaynu isaga u baranno. Matalan waxay ina baraan afar waxyaalood oo Ilaahnimadiisa ina tusa oo ay ka tirsan yihiin awooddiisa, caddaaladdiisa, xigmaddiisa iyo jacaylkiisa. Bal mid kasta aan fiirinno.
Awood aan xad lahayn
Ilaahay wuu awood weyn yahay
Yehowah Ibraahim wuxuu ku yiri: “Waxaan ahay Ilaaha Qaadirka ah.” (Bilowgii 17:1) Ilaahay awooddiisu wax la mid ah ma jiro, xad ma leh, mana dhammaato. Ilaahay awooddiisuu isticmaalay markuu caalamka oo dhan abuurayay.
Ilaahay weligiis xooggiisa si xun u ma isticmaalo, si ulajeeddo leh ayuu awooddiisa intuu u baahan yahay keliya isticmaalaa. Awooddiisa wuxuu ku qiyaasaa caddaaladnimo, xigmad iyo jacayl.
Yehowah si gacan furan buu awooddiisa ugu caawiyaa addoommadiisa daacadda ah. “Rabbiga indhihiisu waxay hor iyo dib u fiirinayaan dunida oo dhan inuu isu adkeeyo kuwa qalbigoodu isaga xaggiisa ku qumman yahay.” (Taariikhdii Labaad 16:9) Miyaanad jeclayn inaad u dhowaatid Ilaahan xoogga badan oo weliba ina daneeya?
“Rabbigu wuxuu jecel yahay caddaaladda.” (Sabuurradii 37:28) Ilaahay wuxuu sameeyo oo dhan waa xaq oo caddaaladdiisu jidkiisa qumman ka ma leexato.
Ilaahay dadka u ma kala eexdo
Ilaahay isagu waa Ilaah caddaaladdarrada neceb “oo aan dadka u kala eexan, laaluushna qaadan.” (Sharciga Kunoqoshadiisa 10:17) Ilaahay wuxuu ka soo hor jeedaa kuwa dadka cadaadiya. Wuxuuna u hiilin doonaa kuwa tabarta yar sida naag “carmal [ah], ama ilmo agoon ah.” (Baxniintii 22:22) Ilaahay binuʼaadanka u ma kala eexdo. Qorniinka Quduuska ah waxaa ku qoran: “Ilaah inuusan dadka u kala eexan: laakiin kii kastoo Ilaah ka cabsada, xaqnimadana sameeya, quruun kastaba ha ku jiree, Ilaah waa aqbalaa.”—Falimaha Rasuullada 10:34, 35.
Yehowah caddaaladdiisu waa kaamil, ma aha Ilaah naxariisdaran laakiin sinaba xaqdarrada u ma dhaafi doono. Ilaahay wuu ciqaabaa kuwa sharka fala oo aan toobadkeenin laakiin wuu u naxariistaa kuwa toobadkeena. “Rabbigu waa raxmad badan yahay, waana nimco miidhan, cadho wuu u gaabiyaa, waana naxariis badan yahay. Isagu had iyo goor wax canaanan maayo, oo sii cadhaysnaan maayo ilaa weligiis. Isagu inoolama uu macaamiloon sidii dembiyadeennu ahaayeen, oo inooguma uu abaalmarin sidii xumaatooyinkeennu ahaayeen.” (Sabuurradii 103:8-10) Ilaahay abidkiis ma illoobo shuqullada addoommadiisa daacadda ah ay aamminaad ku sameeyeen oo wuu u abaalgudaa iyaga. Ilaaha caddaaladdan jecel miyuusan xaq u lahayn aamminaaddaada?
Xigmadda Ilaahay Qoraalka Quduuska ah baa laga helaa
Xigmad oo dhan Yehowah bay ka timid. “Mool dheeraa hodantinimada iyo xigmadda iyo aqoonta Ilaah!” (Rooma 11:33) Xigmaddiisa mid la mid ah ma jirto oo waa mid weligeed dhammaanayn.
Ilaahay xigmaddiisa waxaynu si fiican uga aragnaa waxyaalaha uu abuuray. Sabuurrada waxaa ku qoran: “Rabbiyow, shuqulladaadu tiro badanaa! Kulligoodna xigmad baad ku samaysay.”—Sabuurradii 104:24.
Ilaahay xigmaddiisa waxaa muujiyaa Qoraalkiisa Quduuska ah. Boqor Daaʼuud wuxuu qoray: “Maragfurka Rabbigu waa aamin, oo garaadlaawaha ayuu u caqliyeeyaa.” (Sabuurradii 19:7) Bal ka feker Ilaahay xigmaddiisa aan dhammaanayn waxaad ka baran kartid! Miyaad ka faaʼiidaysan doontaa?
“Ilaah waa jacayl”
Yehowah waxa ugu horreeya oo lagu yaqaanno waa jacayl. Qorniinka Quduuska ah waxay inoo sheegaan “Ilaah waa jacayl.” (1 Yooxanaa 4:8) Ilaahay wuxuu falo oo dhan jacayl baa ka dambeeya.
Ilaahay jacaylkiisa si aan la tirin karin buu inoo tusay. Waxyaalo fiican buu ina siiyaa. “Wanaag buu sameeyey, oo wuxuu samada idinka siiyey roob iyo xilliyo barwaaqo ah, isagoo qalbiyadiinna ka dherginaya cunto iyo farxad.” (Falimaha Rasuullada 14:17) Runtii, “hadiyad kasta oo wanaagsan iyo hibo kasta oo kaamil ah kor bay ka timaadaa iyadoo ka soo degaysa xagga Aabbaha nuurarka.” (Yacquub 1:17) Qorniinka Quduuska ah waa hadiyad qiime kasta ka sarreeysa. Qorniinkaas dhexdiisa wuxuu Ilaahay inoogu muujiyay runta isaga ku saabsan iyo sharciyadiisa jacaylka badan. “Ereygaagu waa rune” buu Ciise yiri markuu tukanayay.—Yooxanaa 17:17.
Ilaahay abuurtiisa xigmadda leh way yaab badan tahay
Ilaahay markaan dhibaataysan nahay wuu ina caawiyaa. “Culaabtaada Rabbiga saar, oo isna wuu ku xanaanayn doonaa, waayo, isagu kan xaqa ah marnaba u dayn maayo in la dhaqaajiyo.” (Sabuurradii 55:22) Dembiyadeenna wuu cafiyaa. “Sayidow, waad wanaagsan tahay, oo waxaad diyaar u tahay inaad dembidhaafto, waanad u naxariis badan tahay kuwa ku barya oo dhan.” (Sabuurradii 86:5) Xitaa wuxuu ina siin doonaa nolol aan dhammaad lahayn. “Isna indhahooda ilmo kastuu ka tirtiri doonaa, oo dhimashona mar dambe ma jiri doonto, oo mar dambena ma jiri doonaan murug iyo oohin iyo xanuun toona.” (Muujintii 21:4) Sidee baad jacaylka Ilaahay uga jawaabi lahayd? Miyaad isagana jeclaan lahayd?
U soo dhowaada Ilaahay
Markaad Ilaahay baridid oo isaga aad uga fekertid waad u dhowaan doontaa
Ilaahay wuxuu rabaa inaad isaga si fiican u baratid. Eraygiisa waxaa ku qoran: “U soo dhowaada Ilaah, isaguna wuu idiin soo dhowaan doonaa.” (Yacquub 4:8) Ilaahay nebigii Ibraahim oo aamminka ahaa wuxuu ugu yeeray “saaxiibkay.” (Ishacyaah 41:8) Yehowah wuxuu rabaa inaad isaga saaxiib la noqotid.
Markaad waxyaalaha Ilaahay ku saabsan si fiican u sii baratid, waxaad dareemi doontaa inaad isaga u dhowaatay kaddibna farxaddaada baa kordhi doonta. “Waxaa barakaysan ninkii” uu “ka farxiya sharciga Rabbiga, oo habeen iyo maalinba sharcigiisuu ka fikiraa.” (Sabuurradii 1:1, 2) Sidaa daraaddeed, sii wado barashada Qorniinka Quduuska ah ku saabsan. Aad uga feker qofkuu Ilaahay yahay iyo shuqulladiisa. Markaad sameysid waxyaalaha ad baratay waxaad muujinaysaa jacaylka ad Ilaahay u qabtid. “Waa kan jacaylka Ilaah, kaasoo ah inaynu qaynuunnadiisa xajinno; oo qaynuunnadiisuna ma cusla.” (1 Yooxanaa 5:3) Oo sidan oo kale Ilaahay u bari: “Rabbiyow, jidadkaaga i tus, oo waddooyinkaagana i bar. Runtaada igu hoggaami.” (Sabuurradii 25:4, 5) Waxaad arki doontaa inuusan Ilaahay “ka fogayn midkeen kasta.”—Falimaha Rasuullada 17:27.
Maxaad u maleysaa?
Waxyaalaha siduu Ilaahay yahay ku saabsan midkee baad ka heshay? Waayo?
Sidee baad Ilaahay ugu dhowaan kartaa?
Wadaag Wadaag Qiime Siduu Ilaahay Yahay
QAYBTA 1 Ilaahay Miyuu Ina Daneeyaa?
QAYBTA 2 Iimaanka Runta ah Muxuu Yahay?
QAYBTA 3 Talo Faaʼiido Leh oo Nolosha Dadka Hagaajisa
QAYBTA 4 Ilaahay Yuu Yahay?
QAYBTA 5 Qiime Siduu Ilaahay Yahay
QAYBTA 6 Muxuu Yahay Qasdiga Ilaahay oo ku Saabsan Adduunka?
QAYBTA 7 Ballantuu Ilaahay Nebiyada u Sheegay
QAYBTA 8 Imanshadii Masiixa
QAYBTA 9 Wax ka Barta Masiix oo ah Hoggaamiyaha
QAYBTA 10 Muujinta Cadowga Rumaysadka
QAYBTA 11 Ku Soco Iimaan Run ah Maanta
QAYBTA 12 Iimaankaaga Runta ah Muuji!
QAYBTA 13 Iimaanka Runta ah Wuxuu ku Siiyaa Farxad Weligeed ah
Qoraal Liiska download gareyska wargeysyo digital ah Iimaan Run ah Waa Waddada Nolol Farxad Leh
Audio Liiska download gareyska maqalka Iimaan Run ah Waa Waddada Nolol Farxad Leh
Wadaag Wadaag Iimaan Run ah Waa Waddada Nolol Farxad Leh